GỤỌ NKE Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language English Estonian Fijian Finnish French German Greek Haitian Creole Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Kikamba Kikuyu Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Otetela Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Vietnamese
“Amalitere m igbo onwe m agụụ mmekọahụ mgbe m dị afọ asatọ. M mechara mụta otú Chineke si ele omume ahụ anya. O wutere m nke ukwuu mgbe ọ bụla m mere ya. M na-ajụ onwe m, sị, ‘Olee otú Chineke ga-esi hụ onye dị ka m n’anya?’”—Luiz.
MGBE ị ghọwara okorobịa ma ọ bụ agbọghọ, mmekọahụ nwere ike ịgụsiwe gị ike, mee ka ị malite igbo onwe gị agụụ mmekọahụ. * Ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụghị ihe ọjọọ. Ha na-asị: “O nweghị onye ọ na-akpatara nsogbu.” Ma, e nwere ezi ihe mere ị ga-eji zere ya. Pọl onyeozi dere, sị: “Ya mere, meenụ ka akụkụ ahụ́ unu . . . nwụọ n’ihe banyere . . . agụụ mmekọahụ.” (Ndị Kọlọsi 3:5) Mmadụ igbo onwe ya agụụ mmekọahụ anaghị eme ka agụụ mmekọahụ ya nwụọ, kama ọ na-afụnye ya ọkụ. Ihe ndị ọzọ ị ga-echebara echiche bụ:
● Mmadụ igbo onwe ya agụụ mmekọahụ na-eme ka onye ahụ na-eche banyere naanị onwe ya. Dị ka ihe atụ, mgbe mmadụ na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ, naanị ihe dị ya mkpa bụ otú ihe ahụ ọ na-eme si atọ ya ụtọ.
● Mmadụ igbo onwe ya agụụ mmekọahụ na-eme ka ọ na-ele onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya anya ka ihe e ji enwe mmekọahụ.
● Ebe ọ bụ na onye na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ na-eche banyere naanị onwe ya, o nwere ike ime ka mmekọahụ ya na di ya ma ọ bụ nwunye ya na-enwe ghara ịna-eju ya afọ.
Kama igbo onwe gị agụụ mmekọahụ na-agụ gị, gbalịa ịna-ejide onwe gị. (1 Ndị Tesalonaịka 4:4, 5) Iji nyere gị aka ime otú ahụ, Baịbụl kwuru na i kwesịrị izere ihe ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla nwere ike ime ka agụụ mmekọahụ gụwa gị. (Ilu 5:8, 9) Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na igbo onwe gị agụụ mmekọahụ eriela gị isi? O nwere ike ịbụ na ị gbalịala ịkwụsị ya, ma o kwebeghị gị. I nwere ike iche ozugbo na ị gaghị akwụsịli ya, na i nweghị ike ime ihe Chineke chọrọ. Otú ahụ ka otu nwa okorobịa aha ya bụ Pedro si na-ele onwe ya anya. O kwuru, sị: “Mgbe ọ bụla m mere ya, ọ na-ewute m nke ukwuu. M chere na o nweghị ihe ga-eme ka Chineke gbaghara m. O siiri m ike ikpe ekpere.”
Ọ bụrụ na ọ dị gị otú ahụ, adala mbà. Olileanya ka dị. Ọtụtụ ndị, ma ndị na-eto eto ma ndị torola eto, akwụsịla àgwà ọjọọ ahụ. I nwekwara ike ịkwụsị ya!
Ihe Ị Ga-eme Mgbe Obi Na-ama Gị Ikpe
Dị ka anyị kwurula, obi na-amakarị ndị na-egbo onwe ha agụụ mmekọahụ ikpe. O doro anya na ọ bụrụ na ị na-enwe “mwute dị ka uche Chineke si dị,” o nwere ike ime ka ị kwụsị àgwà ahụ. (2 Ndị Kọrịnt 7:11) Ma obi gị mawa gị ikpe gafee ókè, o nwere ike imebiri gị ihe. O nwere ike ime ka ị daa mbà, nke ga-eme ka ị chọọ ịkwụsị ịgbalị imeri àgwà ahụ.—Ilu 24:10.
N’ihi ya, gbalịsie ike ile nsogbu ahụ anya otú kwesịrị ekwesị. Mmadụ igbo onwe ya agụụ mmekọahụ bụ adịghị ọcha. O nwere ike ime ka ị “bụrụ ohu nke ọchịchọ na ihe ụtọ dị iche iche.” Ọ na-emekwa ka mmadụ na-eche echiche na-ezighị ezi. (Taịtọs 3:3) Ma, àgwà a abụghị mmekọahụ jọgburu onwe ya dị ka ịkwa iko. (Jud 7) N’ihi ya, ọ bụrụ na ị na-egbo onwe gị agụụ mmekọahụ, i kwesịghị iche na i meela mmehie Chineke na-agaghị agbaghara. Ihe i kwesịrị ime bụ ịrụ ahụ́ gị ụka ma na-agbalị mgbe niile izere ya!
Mgbe ọ bụla i mere omume ahụ, o nwere ike ime ka obi daa gị mbà. Mgbe ụdị ihe ahụ mere, cheta ihe e kwuru n’Ilu 24:16, nke bụ́: “Onye ezi omume nwere ike ịda ọbụna ugboro asaa, ma ọ ga-ebilicha; ma ọdachi ga-eme ka ndị ajọ omume sụọ ngọngọ.” Ime ya ọzọ apụtaghị na ị bụ onye ajọ omume. N’ihi ya, adala mbà. Kama, chọpụta ihe mere i ji mee ya ọzọ. Gbalịakwa ka i zere ihe ahụ.
Na-atụgharị uche n’ịhụnanya Chineke na ebere ya. E nwere mgbe ọbụ abụ bụ́ Devid mehiere n’ihi ezughị okè. O kwuru, sị: “Jehova emeworo ndị na-atụ egwu ya ebere dị ka nna si emere ụmụ ya ebere. N’ihi na ya onwe ya maara nnọọ otú e si kpụọ anyị, ọ na-echeta na anyị bụ ájá.” (Abụ Ọma 103:13, 14) N’eziokwu, Jehova ghọtara na anyị ezughị okè. Ọ “dịkwa njikere ịgbaghara mmehie.” (Abụ Ọma 86:5) Ma ọ chọrọ ka anyị na-agbalị imekwu nke ọma. N’ihi ya, gịnị ka i nwere ike ime iji kwụsị àgwà ọjọọ a?
Chebara ihe i ji atụrụ ndụ echiche. Ihe ị na-ele na tiivi ma ọ bụ na fim ma ọ bụ ebe ị na-aga n’Ịntanet ọ̀ na-eme ka mmekọahụ gụwa gị? Ọbụ abụ kpegaara Chineke ekpere gosiri na ọ ma ihe, sị: “Mee ka anya m ghara ịhụ ihe na-abaghị uru.” *—Abụ Ọma 119:37.
Jisie ike chewe ihe ndị ọzọ. Otu nwanna nwoke aha ya bụ William kwuru, sị: “Tupu ị lakpuo ụra, gụọ Baịbụl ma ọ bụ akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl. Ọ dị mkpa ka ihe ikpeazụ ị ga-eche n’ụbọchị bụrụ ihe gbasara ofufe Chineke.”—Ndị Filipaị 4:8.
Gwa mmadụ nsogbu ị na-enwe. Ihere nwere ike ime ka o siere gị ike ịkọrọ ya onye ị tụkwasịrị obi. Ma, ịkọrọ ya mmadụ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị àgwà a! Otu nwanna nwoke aha ya bụ Devid chọpụtara na ọ bụ eziokwu. O kwuru, sị: “M gara gwa papa m nsogbu m nwere. Agaghị m echefu ihe ọ gwara m. Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị, sị m: ‘Eji m gị eme ọnụ n’ihi omume gị.’ Ọ ma na o siiri m ike ịkata obi gwa ya ihe ahụ. Ihe o kwuru gbara m ume, nyekwara m aka ikpebisi ike ịkwụsị àgwà ahụ.
“Papa m gosiri m ebe ụfọdụ n’Akwụkwọ Nsọ iji nyere m aka ịghọta na abụghị m onye ọjọọ, gosikwa m ebe ndị ọzọ iji chọpụta ma m̀ ghọtara na ihe m mere bụ ihe ọjọọ. Ọ gwara m mgbe ọzọ mụ na ya ga-ekwu banyere ya, sịkwa m jisie ike ka m ghara ime ya ruo mgbe ahụ. Ọ sịrị m adala mbà ma m mee ya ọzọ, sịkwa m nọtee aka n’emeghị ya.” Gịnị ka Devid mechara kwuo? O kwuru, sị: “Ihe baara m ezigbo uru bụ ịgwa mmadụ nsogbu m nwere, onye ahụ ana-enyekwara m aka.” *
Chọpụta ihe mere na e kwesịghị iji inwe mmekọahụ na-egwuri egwu.
^ par. 4 Mmadụ igbo onwe ya agụụ mmekọahụ na mmekọahụ ịnọkata gụwa mmadụ abụghị otu ihe. Dị ka ihe atụ, nwa okorobịa nwere ike iteta n’ụra, mmekọahụ agụwa ya ma ọ bụ ya achọpụta na ọbara ọcha gbapụrụ ya n’ahụ́ mgbe ọ na-arahụ ụra. Otú ahụkwa ka agụụ mmekọahụ nwere ike ịnọkata gụwa nwa agbọghọ mgbe nsọ ya chọrọ ịmalite ma ọ bụ mgbe nsọ ya kwụsịchara. Ma, onye na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ na-eji aka ya eme ka mmekọahụ gụsiwe ya ike.
^ par. 15 Ị chọọ ịgụkwu banyere ya, gụọ Isi nke 33 na nwanne akwụkwọ a bụ́ Nke 2.
^ par. 18 Ị chọọ ịgụkwu banyere ya, gụọ peeji nke 239 ruo 241 na nwanne akwụkwọ a bụ́ Nke 2.
“Gbaara ọchịchọ a na-enwe n’oge ntorobịa ọsọ, kama chụsoo ezi omume, okwukwe, ịhụnanya, udo, gị na ndị ji obi dị ọcha na-akpọku Onyenwe anyị.”—2 Timoti 2:22.
Kpee ekpere tupu mmekọahụ na-agụ gị agụsiwe gị ike. Rịọ Jehova ka o nye gị “ike karịrị ike nkịtị” ị ga-eji merie ọnwụnwa.—2 Ndị Kọrịnt 4:7.
Onye ọ bụla na-adịghị ike nwere ike iji aka ya gboo onwe ya agụụ mmekọahụ na-agụ ya. Ma onye bụ́ dimkpa na-ejide onwe ya ọ bụrụgodị na ọ nọ naanị ya.
Ihe m ga na-eme ka m nwee ike ịna-eche banyere ihe dị ọcha bụ ․․․․․
Kama igbo onwe m agụụ mmekọahụ, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● Gịnị mere o ji dị mkpa ka i cheta na Jehova ‘dị njikere ịgbaghara mmehie’?—Abụ Ọma 86:5.
● Ebe Chineke, bụ́ onye kere mmadụ ka ọ na-enwe mmekọahụ, kwuru na i kwesịrị ịna-ejide onwe gị, gịnị ka obi siri Chineke ike na ị ga-eme?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo dị na peeji nke 182]
“Kemgbe m meriri nsogbu ahụ, ejizi m akọnuche dị ọcha efe Jehova. O nweghị ihe m ga-eji tụnyere ya!”—Sera
Ị daa ada mgbe ị na-agba ọsọ, ọ pụtaghị na ị ga-ebido n’isi—ọ bụrụ na ị na-agbalị ka ị kwụsị igbo onwe gị agụụ mmekọahụ, ime ya ọzọ apụtaghị na ị kụọla afọ n’ala ná mbọ ị na-agba
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Ga-esi Kwụsị Igbo Onwe M Agụụ Mmekọahụ?
yp1 isi 25 p. 178-182